Raharaha kidnapping : Nampiakarina eto Antananarivo ireo roa voarohirohy -
AccueilSongandinaRaharaha kidnapping : Nampiakarina eto Antananarivo ireo roa voarohirohy
Raharaha kidnapping : Nampiakarina eto Antananarivo ireo roa voarohirohy
07/02/2018 admintriatra Songandina 0
Ankoatra ireo olona valo efa nalaina am-bavany tany Toamasina mahakasika ny fakana an-keriny an’i Akyl Cassam Chenai, dia fantatra fa olona roa hafa isan’ireo voarohirohy ao anatin’ity raharaha ity no nampiakarina eto Antananarivo ny alatsinainy alina lasa teo. Araka ny fanampim-baovao marim-pototra hatrany, dia niharan’ny lozam-pifamoivoizana teo Antsampanana ny fiaran’ny mpitandro filaminana nitondra ireto olona ahiahiana ireto, saingy tsy nisy naninona ireto farany na dia teo aza izay voina niseho izay. Vantany vao tonga teto an-drenivohitra moa ireo olona voarohirohy ireo, dia nalefa avy hatrany eny amin’ny toby Ratsimandrava hanaovana fanadihadiana indray, taorian’ny fihainoana azy ireo tany amin’ny biraon’ny manam-pahefana tany Toamasina. Ankoatra ny raharaha kidnapping an’i Akyl Cassam Chenai, dia misy raharaha fakana an-keriny maromaro hafa ihany koa, izay nitranga teto an-drenivohitra hanadinana ireto olona roa ireto, ary isan’izao fampiakarana azy ireo eto Antananarivo izao. Tsy miato fa mbola mitohy kosa ny fikarohana hataon’ireo tompon’andraikitra any Toamasina amin’izao fotoana izao.
Mba hanamorana ny fanaraha-maso ny toe-draharaha, sy ahafahana manatontosa an-tsakany sy an-davany ny fanadihadiana, dia nanapa-kevitra ny minisitry ny Filaminam-bahoaka anatiny sy ny teo anivon’ny “cellule mixte” izay hivondronan’ny fitsarana, ny polisy ary ny zandary ny handefasana mpitandro filaminana ao anatin’io sampandraharaha io, hanatevin-daharana ireo mpanao famotorana any an-toerana. Hatreto dia voasokajy ho isan’ny faritra mafana sy hanjakan’ny raharaha fakana an-keriny ny eto an-drenivohitra sy any amin’ny faritanin’i Toamasina. Saika ao amin’ireo faritra roa ireo avokoa mantsy no hivangongoan’ireo karana mpandraharaha sy tompona orinasa goavana. Ankoatra ireo olona folo izay efa nalaina am-bavany ireo moa, dia isan’ny mandeha ao anatin’ny lisitr’ireo olona voatonontonona mahakasika iny raharaha kidnapping tanyToamasina , ny faran’ny herinandro lasa teo iny , ny anaran’i Stéphanie Roger Lala sy ny ekipany. Mety handalo an-tsain’ny tsirairay avy indray ny hoe ahoana no hahavitany hikononkonona kidnapping any am-ponja? Tsy vao sambany anefa no nisian’ny tranga tahaka izany. Raha tsiahivina, dia mbola voaporofon’ny mpitandro filaminana ho isan’ny atidoha tamin’ny raharaha fakana an-keriny nitranga teto an-toerana, roa taona lasa izay ny anaran’i Djaffar Younous, izay tsara tsindriana fa efa voahidy tao amin’ny fonjaben’i Tsiafahy tamin’izany fotoana. Rehefa nandeha moa ny fanadihadiana lalina, dia fantatra fa amin’ny alalan’ny finday no hifampiresahan’ity jiolahy ikoizana ity amin’ireo mpiray tsikombakomba aminy ety ivelany. Ho hita miandalana ihany moa ny fahamarinan’izay voalaza na tsia.
Hery Rajaonarimampianina : « Efa nosokafako ny fampandrosoana »